Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Awdal Ma Waxay Ahaan jirtay, Mise Waxay Ku Danbeeysay!
Feb 04, 2018 SOMALI NEWS 0
Awdal waxay ahaan jirtay dal madax-banaan oo taariikh dheer leh. Dadkeeduna waxay ahaan jireen dadka ugu ilbaxsan dunida. Saylacna waxay ahayd dakada ugu caansan geeska Africa. Nasiib daro isticmaarkii Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa wiiqay wadanka Awdal oo ka baabiiyay dhamaan dhaqaalaheedi, dakadii Saylacna Albaabada u xidhay, horumarkii ka dhici lahaa wadanka Awdalna hakad galiyay. Mudo laga joogu boqol sano illaa waqtigan la joogo, horumarkii iyo dhaqaalihii Awdal wuxu noqday mid sii shiiqaaya oo sii baaba’aaya. Wax kasta oo dadka Awdal soo qabsaday ha ahaato isticmaarkii Ingiriiska, amma dawladii milatariga ahayd ee Siyaad Barre hogaaminaayay, taariikhda ugu foosha xumi waxay dadka Awdal ku dhacday bishii Febraayo 4teedii, 1991 markii dhagarqabaayaashii SNM iyo ciidankii Mengistu Haile Mariam ku xasuuqeen Awdal in ka badan 1000 qof dharaar iyo bedh, dabadeedna aay qabsadeen. Taasina waxay keentay godkaa foosha xun ee dadka Awdal ku dhaceen. Illa 27 sano dadka Awdal waxay ku jiraan gumeeysi fool xun. Dhaqankii wanaagsanaa ee Awdalna wuxu qarka u saaran yahay inuu baaba’o, dadkuna waxay khatar ugu jiraan dibudhac maskaxeed iyo tafaraaruq. Waxa waajib ah in dadka reer Awdal fahmaan in waqtigii dadku is adoonsan jiray uu dhamaaday, oo maanta bili’aadmi waliba xoriyadiisa u halgamaayo. Qofna ha adoonsan, adna yaan lagu adoonsan weeye sheekadu. Casrigan la joogu qof ku haduuna xor ahayn, kama duwana aalad lagu shaqeeysto oo kolba qof ku dagaal-galo. Awoowyaasheen iyo mocooyooyinkeed maxay sameeyn lahaayeed hadii aay maqlilahaayeen in dadkii reer Awdal dad shaadh qabiil huwan oo jaarkooda ihi gaadhiyaal ku guraan ooy geeyaan Tukaraq iyo Las Anood si aay u fuliyaan ujeeda SNM-ta ee dal-balaadhsiga ku dhisan?
Awdal, Saylacna Albaabada, Siyaad Barre, snm
Daawo: “Hadii Shanti Somaaliyeed La Helayo Anigu Waan Ogolahay Somaliland Way Ogolaanaysa”Siyaasi Cabdilaahi Jawaan Maqaal maanta kasoo baxay madaxda Awdalstate ee Canada ayaa waxa uu daarnaa Inay kulan laqaateen Ninka sheegtay inuu yahay Madax waynaha ""Maamulka United Somaliland Front""